David Beckham oo qarka u saaran inuu lasoo saxiixdo xiddig ka tirsan kooxda Man City – Gool FM
David Beckham oo qarka u saaran inuu lasoo saxiixdo xiddig ka tirsan kooxda Man City
(MLS) 06 Jan 2020. Kooxda Kubadda Cagta ee Inter Miami isla markaana milkiyadeeda uu leeyahay halyeeyga reer England ee David Beckham ayaa waxay ku dhowdahay inay lasoo saxiixato kubad sameeyaha Manchester City ee David Silva, inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee bishan Janaayo.
Inter Miami ayaa ka qeyb gali doonta Horyaalka MLS ee dalka Mareykanka markii ugu horreysay sanadkan 2020, waxayna dooneysaa inay sameyso heshiisyo waaweyn si ay u gasho loolan adag.
Wargeyska “AS” ee dalka Spain oo xiganaya ilo wareedyo Ingiriis ah ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in David Silva uu noqon doono heshiiska ugu horeeya ay sameyn doonto kooxda Inter Miami, madaama wadahadalada labada dhinac ay si wanaagsan u socdaan, islamarkaana ay tahay kaliya in la gaaro heshiis kama dambeys ah ee ku saabsan shuruudaha maaliyadeed iyo wixii la midka ah.
Qandaraaska David Silva ee kooxda Manchester City ayaa dhacaya dhamaadka xilli ciyaareedkan, xiddiga reer Spain ayaa sheegay inuu ka fiirsanayo dib ugu laabashada markale horyaalka La Liga ee dalka Spain, balse waxaa macquul ah inuu u weecdo Horyaalka Mareykanka, kaddib markii uu David Beckham ku adkeystay inuu la soo saxiixdo.
Beckham, oo horey ugu soo ciyaaray horyaalka Mareykanka, ayaa qorsheynaya inuu koox caalami ah ka dhigo Inter Miami, taasoo awoodi karta inay ku guuleysato horyaalka MLS-ka, isagoo dhinaca kale heysta ujeedooyin fog oo ay ka mid yihiin inuu lasoo saxiixdo xiddigaha sida Cristiano Ronaldo, Lionel Messi iyo Neymar Jr.
Mikel Arteta oo carabka ku adkeeyay muhiimada uu u leeyahay koobka FA Cup kooxdiisa Arsenal